Fast Retailing Cuts Outlook after Asia Strife Hits Uniqlo Sales | Myanmar Business Today
Home Business Regional Fast Retailing Cuts Outlook after Asia Strife Hits Uniqlo Sales
Japan’s Fast Retailing Co. cut its full-year outlook after worse-than-expected quarterly results, hit by Hong Kong protests andaSouth Korean consumer boycott that dented sales at its Uniqlo stores.
A weaker yuan and violent protests in Hong Kong during its financial first quarter to November 30 hit operating profit in the Greater China region, which includes its Hong Kong stores.
The company’s South Korea business, meanwhile, fell into the red afteraprolonged boycott of Japanese goods.
Annual operating profit was forecast to fall5percent to 245 billion yen ($2.24 billion), againstapreviously expected rise to 275 billion yen for the year ended August 31.
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ Fast Retailing Co သည် ဟောင်ကောင် ဆန္ဒပြမှုများနှင့် တောင်ကိုရီးယား သုံးစွဲသူများ၏ သပိတ်မှောက်မှုများကြောင့် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ဆိုးရွားသော ရလဒ်များထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် တစ်နှစ်စာ အလားအလာ ခန့်မှန်းချက်များကို လျှော့ချခန့်မှန်းခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အာရှဒေသ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် မှီတည်နေပြီး အထူးသဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် မှီတည်နေသည်။
ပြည်တွင်းတွင်တော့ Uniqlo သည် ယှဥ်ပြိုင်မှုပြင်းထန်လာသည့် ဈေးကွက်နှင့် ကြုံတွေ့နေရပြီး စားသုံးသူများ၏ ငွေကြေးသုံးစွဲမှု လျော့ကျလာခြင်းကိုလည်း ကြုံတွေ့နေရသည်။ ကုမ္ပဏအနေဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းသည် ယခုနှစ်အတွင်း အမြတ်အစွန်းရရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသော်လည်း ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ကို လူသိများအောင်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲကြုံနေရသည်။
ယွမ်ဈေးကျခြင်းနှင့် ဟောင်ကောင်မှ ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် ဟောင်ကောင် စတိုးဆိုင်များအပါအတွင် တရုတ်ဒေသတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အမြတ်အစွန်းများ ထိခိုက်ခဲ့ရသည်။
Previous articleThousands on Strike over Pay at Cambodian Casino
Next articleAustralian Fires Hit Key Dairy Regions